Dad Loo Qabtay Qarax Khasaaro Geystay Oo Ka Dhacay Gaalkacyo – Radio Baidoa
Dad Loo Qabtay Qarax Khasaaro Geystay Oo Ka Dhacay Gaalkacyo
By Webmaster	 On Nov 21, 2020
Ciidamada ammaanka Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug dhinaca Maamulka Puntland ayaa xalay howlgal kala duwan ka sameeyay xaafaddo dhowr ah oo ka tirsan Gaalkacyo.
Howlgalka ayaa waxaa lagu qabtay shabakad looga shakiyay inay ka dambeeyeen weerar loo adeegsaday Bam gacmeed oo xalay fiidnimadii hore lagu weeraray Ciidamo ka tirsan kuwa amniga Magaalada, xili ay ku sugnaayeen Bar koontarool.
Saddex ruux oo lagu tuhamayo weerarkaas ayaa laamaha amniga gacanta ku dhigeen, sida sheegeen Saraakiisha amniga Puntland, kuwaasi oo ku xiran Saldhig Ciidan, isla markaana ay ku socdaan baaritaano.
Dad goobjoogayaal ah oo xiligii xalay weerarka uu dhacayay warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in goobta uu ku geeriyooday hal qof oo halkaas ka Agdhawaa, sidoo kalena laba Askari ay dhaawacyo gaareen, durbana la geeyay Xarun Caafimaad.
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxaa xiliyada habeenkii ah mararka qaarkood ka dhaca falal amni darro, waxaana dhawaan Saraakiisha Ciidanka Puntland ay sheegeen in howlgal la sameeyay lagu qabtay xubno ka tirsan Al-shabaab oo falal amni darro geystay.
Guddi Loo Magacaabay Xalinta Colaada Dhiiga Badan Ku Daatay Ee Itoobiya